TIKTOK'S PANDAGIRL သည် SMITHDOWN ASDA တွင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းတစ်ခုပြုလုပ်နေသည်။ - သတင်း
လီဗာပူးလ် TikTok ကြယ်ပွင့် PandaGirl ကသူမသည်လူမှုရေးအရဝေးလံသောနေရာတွင်တွေ့ဆုံပြီးအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမည့် Smithdown လမ်းမပေါ်တွင် ASDA ၌နှုတ်ဆက်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ နှင့် လက်မှတ်တွေဟာလုံးဝအခမဲ့ပါ
နာမည်ဖြင့် TikTok ကိုအသုံးပြုသော PandaGirl ပန်ဒာ.9.94 သူမ၏အစားအစာများကိုပုံမှန်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်စင်မြင့်ပေါ်ရှိဘာဂါများနှင့်ချစ်ပ်များကိုသူမ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖြန့်ဝေနေစဉ်သင့်လျော်သောကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့်သင့်လျော်သည့်အရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခုအဖြစ်ဖော်ပြခြင်းအားဖြင့်, ကျော်ကြားမှုသို့တက်ခဲ့သည်။
PandaGirl ကသူမရဲ့မျက်နှာကိုပန်ကာတွေနဲ့ထုတ်ဖော်ပြခဲ့ပေမယ့်သူမမွေးဖွားတဲ့နာမည်ကအခုထိမသိရသေးပါဘူး။ ဒါကနောက်ဆုံးမှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ရွှေရောင်အကြောင်းအရာနောက်ကွယ်ကလူသားကိုသိခွင့်ရစေမှာပါ။
PandaGirl က The Tab Liverpool သို့ပြောကြားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ပရိသတ်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမိပြီး၎င်းတို့နှင့်ကောင်းမွန်သောညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
တွေ့ဆုံခြင်းနှင့်နှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်းသည်သင်၏ပရိသတ်ကိုသိရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Smithdown ASDA ထက်ကျွန်ုပ်နှင့်တွေ့ဆုံမည့်အခြားနေရာများတွင်မစဉ်းစားနိုင်ပါ။
PandaGirl ကသူမသည် ASDA တွင်တွေ့ဆုံရန်နှုတ်ဆက်ခြင်းကိုစတင်စိုးရိမ်ခဲ့သည်ဟုဝန်ခံသော်လည်းသူမအနေဖြင့်ပေါင် ၅ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့စာရောင်းအားကိုတိုးမြှင့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
UoL မှနောက်ဆုံးနှစ်သမိုင်းကျောင်းသား Joseph Kerr က The Tab ကိုပြောကြားရာတွင်သူသည် PandaGirl နှင့်တွေ့ဆုံခွင့်ရရန်သူအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့သည် - ကျွန်ုပ်ဤသို့အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်လုံးဝမထင်ခဲ့ပါ။ ငါ ASDA ကိုသွားတိုင်းငါသူမသို့ဝင်လာသည်ကိုစိတ်ကူးမိသည်၊ သို့သော်ငါထိုအရာကိုကြာကြာမစဉ်းစားတော့ပါ။
ငါအစာစားရန်ထိုင်အခါတိုင်း, ငါ့ကိုအထဲမှာစကားသံ '' သင့်လျော်သောကောင်းတဲ့, သင့်လျော်သော bargain '' ကပြောပါတယ်။ PandaGirl ကကျွန်တော့်ဘဝကိုကောင်းကောင်းကောင်းကောင်းကောင်းမွန်စွာပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ရုပ်ပုံကိုတွေ့ရ။ ကျွန်ုပ်၏ 'yoalright gurl?' ကိုကျွန်ုပ်အားမည်မျှစိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့်စကားလုံးများမပြောနိုင်ပါ။ ငါသာစစ်မှန်တဲ့ PandaGirl ပရိသတ်တွေကြောင်းရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
တက်ရောက်သူများအားမျက်နှာဖုံးများ ၀ တ်ဆင်။ ရွယ်တူချင်းများထံမှအစိုးရလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာရန်လုံခြုံသောအကွာအဝေးကိုထိန်းသိမ်းရန်အကြံပေးသည်။ သင်၏အချိန်အပိုင်းအခြားအတွက်သင့်အား ASDA အပြင်ဘက်တွင်တန်းစီမည်ဟုမျှော်လင့်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်စီစဉ်သူများကရေယူရန်အကြံပြုသည်။
ပွဲအတွက်လက်မှတ်တွေဘယ်မှာရနိုင်မလဲဆိုတဲ့နောက်ထပ်အချက်အလက်တွေအတွက်တော့သင်ဟာရက်စွဲကိုစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ မင်္ဂလာAprilပြီ Fool ရဲ့!
• TikTok တွင် Pandagirl.94 သည်မည်သူနည်း။ သူမအဘယ်ကြောင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုစွဲလမ်းနေသနည်း။
•ဇွန် ၂၁ ရက်မတိုင်မီလီဗာပူးလ်အသင်းသို့အသင်းသွားနိုင်လိမ့်မည်!
ဆယ်စုနှစ်၏ meme ကဘာလဲ
•လက်မှတ်များကိုစာရင်းသွင်းပြီးပြီဇွန်လ ၂၁ ရက်မှလီဗာပူးလ်ပွဲများဖြစ်သည်